Ubulale intombi ememeze igama le- 'ex' benza ucansi | News24
Ubulale intombi ememeze igama le- 'ex' benza ucansi
Sunrise – Iziphathimandla zithi umlisa waseFlorida ofonele i-911 wathi intombi yakhe ayikwazi ukuphefumula kahle, ugcine evumile ukuthi uyibulele.
Amaphoyisa aseSunrise atshele abezindaba ukuthi uFidel Lopez oneminyaka engu-24 ubudala ufonele i-911 ekuseni ngeSonto.
Amaphoyisa afike endlini athe athole uLopez ekhala endlini yangasese eceleni kwesidumbu sikaMaria Nemeth, 31, ebesinqunu.
Funda nalolu daba: Kushone 1 kwalimala 1 kuqhuma efemini
Amaphoyisa athi uLopez uqale wathi bebenza ucansi ngesikhathi uNemeth eya endlini encane, wafike waphalaza wabe esewela phansi.
Ngesikhathi eqhubeka nokuphekwa ngemibuzo, uLopez uvumile ukuthi udinwe uNemeth ngesikhathi ebiza igama lowayengumyeni wakhe ngesikhathi benza ucansi, wabe esembulala.